न्यायाधीशहरूले मसंग रिसिबी राख्नु भएको रहेछ र सोहि अनुसार फैसला आयो : माधव नेपाल:: Mero Desh
न्यायाधीशहरूले मसंग रिसिबी राख्नु भएको रहेछ र सोहि अनुसार फैसला आयो : माधव नेपाल
Published on: २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ११:२५
काठमाडौँ — पुस ५ यता नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १२० सांसदमध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल खेमामा छन् । यो साविकको नेकपाको कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतमात्रै हो । यो संख्याले नेपाल समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग विभाजित भएर अर्को
‘टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?’पार्टी बनाउन दिँदैन । अर्को पार्टी बनाउने हो भने सांसदहरुको पद नरहन सक्छ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरूलाई ओलीसँग मिलेर जान राजनीतिक र छुट्टिएर अघि बढ्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ छ । कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको संवादमा नेपालले के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सोचिनसकेको बताए तर अदालतको फैसलाले आफूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको उनले प्रतिक्रिया दिए । नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यो त विचित्रको फैसला भयो त । यस्तो पनि हुन्छ ? पार्टी एक भएको छ । नाम फेर भन्नु एउटा कुरा हो । एकीकरण नै भएन भन्न पनि कहीँ मिल्छ ? दुइटा पार्टी अलगअलग निर्णय गरेर एकताबद्ध भए । एकताबद्ध भएपछि नाम मिलेन भन्नु एउटा कुरा भयो । एकीकरणको वैधतामा नै प्रश्न खडा हुन सक्छ ?अदालतले फैसला नै गरिसकेपछि अब त्यसलाई मान्नुपर्छ होला नि त ?न्यायिक हुन्छ होला नि त निरुपणका पक्षहरु । हामी कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ । सरकारको वैधतामा त प्रश्न खडा भई नै हाल्यो । अदालतको फैसलाबाट यो सरकार त रहेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार नै भएन भनेपछि यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न खडा भयो ।
दालतको फैसलापछि साविकको एमालेमै पनि तपाईंको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो परेको हो ?हो । सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पऱ्यो । किन यस्तो भयो होला ? यो त विचित्रै भयो । जुन चिजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने किन यस्तो गरेको होला ? के हो ? टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?